I-ADM3058E / ADM2761E / ADM2763E Ama-Transceivers - Micro-Semiconductor.com
I-ADM3058E / ADM2761E / ADM2763E Ama-Transceivers
I-ADM3058E, i-ADM2761E, ne-ADM2763E ye-Analog Devices isiza ukunciphisa isikhathi sokuklanywa nezindleko zempahla
I-ADI's ADM3058E, ADM2761E, ne-ADM2763E transceivers nge-1500 VDC i-voltage yokusebenza ne-5.7 kV ukuqiniswa okuqinisiwe kunciphisa isikhathi sokuklanywa nezindleko ezibonakalayo zokufuna ukusetshenziswa kwamandla elanga. I-ADM2761E ne-ADM2763E ehlukanisiwe i-RS485 ifaka izici ezihlakaniphile ukunciphisa ukufaka uhlelo lokuphela nesikhathi sokulungisa iphutha. I-ADM3058E inika amandla ukuhambisana okubuyela emuva futhi ingahlukanisa ngokuphelele amanethiwekhi we-bandwidth aphezulu we-CAN FD emabangeni amade namamaki wesikhathi athuthukisiwe.
Izinhlelo ze-1500 V ezinamandla aphezulu zinciphise izikhathi zokufaka futhi zinika amandla ukwehla okukhulu kwezindleko zohlelo kanye nokwenza kahle ukukhiqizwa kwamandla elanga minyaka yonke
I-IEC 61000-4-2 ESD ne-5.7 kV iqinise ukuhlukaniswa kwedijithali kwe-iCoupler nge> 8 mm creepage kanye clearance. Gcina ubuqotho besiginali ezindaweni ezinokhahlo ngokuphepha okuthembekile kwe-iCoupler ukuhlukaniswa kwedijithali
Kudlula ukukhishwa kwe-EN 55032 / CISPR 32 Class B ebhodini lezingqimba ezi-2. Inika amandla i-node eqinile ye-IEC61000-4-2 nge-CISPR32 elinganiselwe ukukhishwa ebhodini elinezingqimba ezi-2 ngenkathi kunciphisa ubunzima bokudizayina, izindleko zebhizinisi, kanye nesikhathi semakethe
Ingqalasizinda yokwakha: ukulawula ukwakhiwa nokuzenzekelayo
I-EVAL-ADM3058EEBZ ADM3058E IBHODI LOKUHLOLA 4 - Ngokushesha
I-EVAL-ADM2761EEBZ ADM2761E IBHODI LOKUHLOLA 0
I-EVAL-ADM2763EEBZ ADM2763E IBHODI LOKUHLOLA 0
ADM3058EBRIZ I-1500VIORM EYODWA NE-CAN-FD TRANSC 50 - Ngokushesha
ADM2761EBRWZ I-1500VIORM ISORS485 500KBPS HD XC 47 - Ngokushesha
ADM2763EBRWZ I-1500VIORM ISORS485 500KBPS FD XC 12 - Ngokushesha